Mamolavola mailaka sakaiza finday | Martech Zone
Talata, Oktobra 18, 2011 Alarobia, Oktobra 26, 2011 Adam Small
Ny fironana Internet rehetra dia manondro fitomboana lehibe amin'ny isan'ny mailaka vakiana amin'ny finday. Ny statistika sasany dia naneho fa ny 40% amin'ireo mailaka orinasa rehetra dia vakiana amin'ny finday. Tao anatin'ny 6 volana lasa, ny famakiana mailaka amin'ny fitaovana finday dia mahatratra 150%! Ny fahitana ny mailaka amin'ny efijery kely dia misy ny fahasarotana sy tombony azo. Ny fitaovana sasany dia manohana HTML, ny sasany mampiditra sary amin'ny toerana misy anao, ny sasany manana ny topi-maso mialoha ny fisokafan'ny mailaka, ny sasany kosa handanja ny haben'ny mailaka ho azy, ary ny ankamaroany dia handanja ireo endritsoratra mba hovakiana.
Litmus dia nanome an'ity infographic tena mampahalala ity momba ny fomba hanatsarana ny endrika mailakao amin'ny fitaovana finday. Ny infographic dia manoritra singa lehibe amin'ny famoronana endrika amam-bika sy ny fandrika izay misy fiantraikany amin'ny fampisehoana. Rehefa manakaiky ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra isika dia zava-dehibe ny fiheverana rehefa mandefa mailaka ny mpivarotra… maro ny mpamaky no hamaky azy ireo rehefa miantsena izy ireo! Hahay hamaky ny anao ve izy ireo?
Jun 9, 2012 ao amin'ny 2: 52 PM
Vita tsara izany, nataoko pirinty ary apetaka amin'ny latabatra ary matetika no jereko. Misaotra betsaka tamin'ny famokarana an'ity.
Jun 9, 2012 ao amin'ny 3: 38 PM
Ireo olona tsara at http://www.litmus.com mendrika ny laza, Norma!